भन्सार अधिकृत पवित्रकुमारसहित ६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर, ७५ करोड मागदाबी | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर भन्सार अधिकृत पवित्रकुमारसहित ६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर, ७५ करोड मागदाबी
on: December 10, 2018 मुख्य खबर, समाचार
मङ्सिर २४, काठमाडौं (अस) । राजस्व अनुसन्धान विभागले भन्सार छलिको अभियोगमा रसुवा भन्सारका तत्कालीन भन्सार अधिकृतसहित ६ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ । सोमवार विभागले ति अभियुक्तविरुद्ध ७५ करोड ९६ लाख ३१ हजार ९ सय ८ रुपैयाँ ४० पैसा मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो ।
रसुवा भन्सारका तत्कालीन भन्सार अधिकृत पवित्रकुमार खड्का, भन्सार कार्यालयका नायव सुब्बा धिरजकुमार थापा, मितेरी इन्टरनेशनलका प्रोपाइटर सुमन श्रेष्ठ र सामानधनी रञ्जन त्रिपाठीलाई मुख्य अभियुक्त बनाई विभागले मुद्दा दायर गरेको हो । उनीहरूविरुद्ध जरिवानासहित जनही रू. १५ करोड बिगो र ३ वर्ष कैद मागदाबी गरिएको छ ।
त्यस्तै, दुई जनालाई मतियारका रुपमा मुद्दा दायर गरिएको छ । जसमा लाङटाङ ट्रेड कन्सर्नका प्रोपाइटर धनबहादुर तामाङ र गाडी चालक डम्बरबहादुर श्रेष्ठ छन् । उनीहरू दुबैविरुद्ध जनही रू. ७ करोड ५९ लाख बिगो र डेढ वर्ष कैद मागदाबी गरिएको छ ।
यी सबैको ‘सेटिङ’मा गत साउन १५ गते रसुवा भन्सारबाट जाँचपास भएको एक ट्रक सामान विभागले नियन्त्रणमा लिएको थियो । उक्त सामानको कम राजस्व असुल गरिएको भन्दै विभागले अनुसन्धान गरेको थियो ।
विभागले सामान ल्याउन प्रयोग भएको ना५ख ६६५४ नम्बरको ट्रक र नियन्त्रणमा लिइएको सामानसमेत जफत हुनेगरी मागदाबी गरेको छ ।